🥇 Ukwenza ingxelo ngeworkshop yokuthunga
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 921
Ividiyo ye-accounting yocweyo lokusebenzela
Uku-odolwa kwengxelo kwiworkshop yokuthunga
Isoftware yobalo yethu yokusebenzela yokuthunga ikunceda wenze ukuba ulawule zonke iinkqubo kwinkampani yakho. Ngoncedo lwayo, unokubeka iliso kwimpahla ukususela ngexesha lokuthenga izinto ukuya kuthi ga kumzuzu wokuzithengisela umthengi kunye nokufumana imali, ukulawula iintlawulo kuyo yonke imimandla kunye nokubeka esweni umsebenzi wabasebenzi kwisebe ngalinye nakwindawo nganye. Inkqubo yocwangciso-mali yocweyo lokusebenzela isetyenziselwa ukuthunga oomasifundisane ukonyusa inzuzo ngokubala ngokupheleleyo iindleko kunye nokugcina ixesha elimisiweyo lokugqibela lokuthenga, ukuthengwa kunye neentlawulo zebhanki zisezantsi. Ngenkqubo yokubalwa kwemali yokusebenzela yokuthunga, unokuhlalutya ukusebenza kweworkshop yakho yokuthunga kwaye uchonge ubuthathaka kuyo ukupheliswa okulandelayo. Aba banokuba ngabahlawuli abangathembekanga, ababolekisi kunye nabathengisi, kunye nabasebenzi abafuna uqeqesho, njalo njalo.
Ndiyabulela kweso sicelo, unokuchonga ubukho okanye ukungabikho kobusela kwinkampani kwaye ngokukhawuleza ubale ukusebenza kwesebe ngalinye. Inkqubo yobalo kumasifundisane wokuthunga ikuvumela ukubala ingeniso yayo yonke inkampani kunye nesebe ngalinye, isebe kunye nomsebenzi, uchonge inzuzo, kwaye ubale iindleko, iindleko kunye nerhafu. Lo ngumncedisi opheleleyo obandakanya zonke iinkcukacha zempahla, abathengi kunye nezemali ngaxeshanye, onokuthi ulawule yonke into ngaxeshanye. Ukusetyenziswa kwethu kobalo lweeworkshop zokuthunga kunokusebenza ngaphandle komthungo nezinye iinkqubo zomsebenzi. Usebenzisa isoftware, uchitha ixesha elincinci kakhulu ukulawula iiasethi ezikhoyo kwaye unexesha elininzi lokuphumla, kunye nokwenza kunye nokuphuhlisa iiprojekthi ezintsha. Ukukhetha inkqubo yobalo kwiworkshop yokuthunga evela kwiNkampani yeUSU, ufumana usetyenziso olupheleleyo lweshishini lakho ngonxibelelwano olulula nolunomdla. Inceda ekwenzeni lula inkqubo yokulawula imicimbi yenkampani.
Siyayiqonda indlela ekunzima ngayo kusomashishini ukugcina ulawulo olupheleleyo kwishishini, ukubeka esweni onke amasebe kunye nakho konke ukuthengwa kunye nentengiso, kwaye ke sikunika isicelo sangoku sokuphatha inkampani yakho. Akunyanzelekanga ukuba uhlale phantsi uqonde yonke into kangangeentsuku; Kwinkqubo yokusebenzela yokuthunga ingxelo unokuyifumana ngeeyure ezimbalwa. Abasebenzi bethu baya kukunceda kule nto. Kukho umboniso okhethekileyo kunye nezixhobo zoqeqesho- umboniso kunye nevidiyo. Yonke into ichazwe kubo ngendlela eneenkcukacha kunye nokufikeleleka. Konke ukuhamba komsebenzi kwinkqubo yokunikwa kwengxelo yolawulo lweeworkshop zilungelelaniswe zangamacandelo, nto leyo eyenza lula ukufikelela kulwazi olufunekayo, endaweni yokuba ubufuna ngogcino oluqhelekileyo. Sihlala siphucula isoftware, ukwandisa amandla ayo kunye nokuphucula ujongano ukwenza kube lula kuwe ukulawula inkampani yakho. Emva kokuthenga isoftware kuthi, unokuhlala uqhagamshelana nathi kulondolozo lobugcisa.
Ngokulawula ukubalwa kwezimali kumasifundisane wokuthunga usebenzisa inkqubo yocwangciso-mali lokusebenzela, uqinisekile malunga nokuchaneka kwezinto ezithengiweyo kunye neeyure zabasebenzi ezenziweyo zokwenza iimpahla, kwaye, ngokufanelekileyo, awoyiki ukulahlekelwa yinzuzo ngenxa impazamo kubalo. Awudingi ukuba uthenge inkqubo yobalo lweeworkshop. Ukuqinisekisa ukuba iyasebenza, ungasebenzisa idemo yesilingo ukuze uqhelane nokusebenza kwayo kunye nokujongana nayo.
Olunye lweempawu ezibalaseleyo zesicelo sethu esiphambili kulawulo olungqongqo kuzo zonke iinkqubo ezenzeka kwishishini lakho. Ukuba uneengxaki ezininzi ekubaleni inzuzo kunye nenkcitho, ke zikhona iindaba ezimnandi kuwe, njengoko isicelo singenza noshicilelo oluchanekileyo lokungena nokuphuma kwemali. Ke, uya kuyazi ukuba zithini na iindleko zakho. Oku kukunceda ukuba uthathe isigqibo esifanelekileyo sokuqinisekisa ukukhula okuzinzileyo kwenkampani yakho. Ngapha koko, isoftware yaziwa ngokuchanekileyo kokusebenza. Nayiphi na impazamo ayibandakanywa ngenxa yenkqubo ye-accounting esebenza njengewotshi kwaye iqinisekisa ucwangco kumbutho wakho kanye emva kweentsuku zokuqala zokusebenzisa inkqubo.
I-USU-Soft iqinisekisile ukuba wanelisekile ngumbono wesicelo. Zininzi imixholo kwaye unokukhetha eyona ndlela ifanelekileyo yokubonelela abasebenzi bakho ngemeko efanelekileyo yokusebenza. Wasebenzise amathuba kwaye ulinge uyilo okoko ufuna! Xa kukho amathandabuzo ukuba ingaba le nkqubo ikulungele okanye akunjalo, emva koko unokuzama ingxelo yethu yasimahla yedemo. Ungayisebenzisa ixesha elincinci. Ngaphandle kwalonto, imisebenzi ikwanomda. Nangona kunjalo, injongo yale nguqulo kukubonisa amathuba esoftware, ukuze ucinge ukuba ungasifumana na isicelo okanye hayi. Sinokuqinisekisa ukuba le nguqulo ingaphezulu ngokwaneleyo ukuba uyiqonde!
Ukwenza ingxelo ngeworkshop yokuthunga ayingomsebenzi olula. Zininzi iinkqubo ezingenakushiywa zingalawulwa. Nangona kunjalo, ishishini lifuna uninzi lwabasebenzi ukulawula zonke ezi nkqubo. Oku kuthetha iindleko ezongezelelweyo kunye nokwehla kwengeniso nokusebenza. Yiyo loo nto oosomashishini abaninzi bekhetha ukwazisa oomatshini abazihambisayo kumashishini abo, njengoko inezibonelelo ezininzi. Okokuqala, ukuzenzekelayo kuqinisekisa ukuba yonke imisebenzi ekruqulayo ekruqulayo kwaye ngamanye amaxesha inzima (eyenzelwe abantu) yenziwa ngendlela ezenzekelayo ngaphandle kweempazamo okanye ulibaziseko. Okwesibini, unokubakhulula abasebenzi bakho kule misebenzi kwaye ubayeke benze into ebaluleke ngakumbi. Ukufuduswa okunjalo kwezixhobo zabasebenzi akunakunceda kodwa kuzuze ishishini lakho kwaye kuzise impumelelo yakho kwinqanaba elitsha. Ngaphandle koku, inkqubo ye-USU-Soft ithengwa kube kanye. Asifuni ntlawulo yenyanga ngokusetyenziswa kwesicelo sethu. Kungenxa yoko le nto sikhethwe ziinkampani ezininzi kwihlabathi liphela!